Safiirka Jarmalka ee Shiinaha oo la magacaabay ayaa si lama filaan ah u dhintay: Baaritaan
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Jarmalka Jebinta Wararka » Safiirka Jarmalka ee Shiinaha oo la magacaabay ayaa si lama filaan ah u dhintay: Baaritaan
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Shiinaha • Jarmalka Jebinta Wararka • Wararka Dowladda • News • Dadka • Ammaanka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Wararka kala duwan
Waxaa loo dhaariyay inuu ahaa safiirkii ugu dambeeyay ee Jarmalka 24 -kii Ogosto, waxaana loo yaqaanay gacanta midig Chancellor -ka Jarmalka Merkel. Muxuu maanta u dhintay? Mas'uuliyiinta Jarmalka ayaa ka aamusan duruufaha, sababtuna tahay baaritaan la sugayo.
Jan Hecker, oo ahaa safiirkii Jarmalka ee dhawaan loo magacaabay Shiinaha ayaa subaxnimadii Isniinta ku geeriyooday magaalada Beijing
Duruufaha murugadiisa waxaa loo hayaa qarsoodi ilaa hadda, waxaana baaraya Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Jarmalka
Danjire Hecker waxaa la magacaabay 24 -kii Ogosto, isagoo ka tagay xaaskiisa iyo saddex carruur ah markii uu maanta dhintay isagoo 54 jir ah.
keliya ayaa maalmo kooban ku jiray kaalintii safiirnimo. 54-jirkan ayaa horay u soo noqday la-taliyaha arrimaha dibadda ee hoggaamiyaha Jarmalka Angela Merkel.
Danjire Hecker waxaa la magacaabay dhammaadkii bishii Ogosto. Wuxuu ahaa 54 jir wuxuuna ka tagay xaaskiisa iyo saddex carruur ah.
Danjiraha Jarmalka ee Shiinaha ayaa ka mid ahaa dadka aadka ugu dhow dhow iyo la taliyayaasha amniga qaranka ee ka tagaya hoggaamiyaha Jarmalka Angela Merkel.
Dhowr maalmood uun ka hor, waxaa la arkay isagoo muujinaya midnimada saaxiibkiis Lithuania.
“Waa murugo iyo naxdin qoto dheer inaan ogaannay geerida lama filaanka ah ee safiirkii Jarmalka ee Shiinaha,” ayaa lagu yiri bayaan ay soo saartay Wasaaradda Arrimaha Dibadda Jarmalka Isniintii.
"Fekerkayaga xilligan wuxuu la jiraa qoyskiisa iyo dadkii ku dhowaa."
Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Jarmalka ma aysan sheegin duruufaha ka dambeeya geerida diblomaasiga.
Mr. Hecker wuxuu hore u ahaan jiray qareen iyo garsoore.
Wuxuu la kulmay Madaxweynaha Mareykanka Biden iyo Chancellor Merkel kulanka G7.
Hecker ayaa u muuqday "Faraxsan oo hagaagsan" intii lagu jiray munaasabad uu ku marti qaaday gurigiisa Beijing Jimcihii la soo dhaafay, mid ka mid ah martida ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters.
Intii ay soo bandhigaysay safiirkoodii 14-aad ee Shiinaha, safaaradda Jarmalku waxay sheegtay in hadafkiisa ugu weyni uu noqon doono xaqiijinta “horumarka muddada fog iyo xasilloonida ee xiriirka Jarmalka iyo Shiinaha…
Waxaa la sheegay inuu qorsheeyay inuu dib ugu laabto Jarmalka oo uu sii wado la shaqeynta jagada ilaa dhammaadka waqtigeeda. Si kastaba ha ahaatee, “xaalad diblomaasiyadeed” oo cakiran awgeed, oo laga yaabo inay la xiriirto qabsashadii Daalibaan ee Afgaanistaan, dawladda federaalku waxay go’aamisay in “Safaaradda Jarmalka ee Beijing ay hubiso inay aad waxtar u leedahay. Jarmalka ayaa ku amray inuu sii joogo Beijing.